Suxufiyiin xabsiga laga daaway Somaliland - BBC News Somali
Suxufiyiin xabsiga laga daaway Somaliland
27 Maajo 2014
Gudoomiyihii wargeysyada Haatuf iyo Somaliland Times Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo tafaftirihii wargeyska Haatuf Axmed Cali Cige, ayaa galabta damiin lagaga soo daayay Xabsiga, kadib markii maxkamadda gobolka Hargeysa ay xarig rumaan ah u dirtay 10-kii bishii May 2014.
Waxay ku xirnaayeen jeelka magaalada Gabilay.
Labadan Suxufi, oo wargeysyadooda Haatuf iyo Somaliland Times la xayiray 7dii April 2014, waxaa xeer ilaalinta Somaliland ku soo eedeeyeen wax ay ku tilmaameen Aflagaado madaxda qaranka iyo warar beebn abuur ah, oo 'khalkhal gelin kara nabadgelyada Somaliland'.
Qareenada u doodaya labadan suxufi, oo dacwadoodu weli ka socoto maxkamada gobolka ee Hargeysa; waxay beeniyeen dacwada lagu soo oogay. Waxa ku doodayaan in wargeysyada Haatuf iyo Somaliland Times ay qoreen oo keliya musuqmaasuq ay galeen wasiiro ka tirsan somaliland maamulka.
Maxkamada, ayaa u mudeysay maalinta sabtida ee 31-ka May in la dhegeysto dacwaddan loo haysto wargeyska Haatuf markii saddexaad.